အဖေကြီးပီးဒေါ့ အမေကြီး PaPa MaMa | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » အဖေကြီးပီးဒေါ့ အမေကြီး PaPa MaMa
အဖေကြီးပီးဒေါ့ အမေကြီး PaPa MaMa
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Mar 9, 2015 in Myanma News, Opinions & Discussion | 11 comments
အဖေကြီးက ရိုးတယ်.. သိပ်ကောင်းတာ… အမှန်ဂ အောက်ကကောင်တွေ လုပ်တာ၊ ဒင်းဒို့ဖျက်နေတာ..။ အဖေကြီးတော့ မပြောကြပါနဲ့ကွယ်.. သူက ဟိုးအပေါ်မှာနေတာ အောက်မှာ ခိုးလုပ်နေတာတွေ သိနိုင်ဗမလား။ အဖေကြီး ဒီလောက် အလုပ်များတာ၊ ဟေ့ ငါတို့ အဖေကြီးကို မထိနဲ့.. မင်းတို့ကောင်တွေ ဆူပူအကြမ်းဖက် လူရမ်းကားဒွေ၊ ကလာဒိန်တွေ၊ ပုဆ်ိန်ရိုးတွေ….
ကျနော်တို့ ငယ်စဉ်က မဆလပါတီနဲ့ နီးစပ်သူတွေ ပြောတဲ့ လာဘ်သုံးစဂါး ကြားဖူးနားဝပါ။ ရာစုနှစ် တဆိတ်အကြာ သမိုင်းဓဗက် ပျံလည်ဒေါ့…
ပါတီ အောက်ခြေက သောက်သုံးမကျလို့ ၊ နာမည်ခံ ဖျက်ဆီးနေတာ၊ သူတို့ကပဲ တလောကလုံး တင်ကျွေးးထားသလို.. ဒါတွေ အမေနဲ့မဆိုင်၊ အောက်ကဖြစ်တိုင်း သိမနေနနိုင်။ သူတို့ကြောင့် အမေစု နာမည်ပျက်တာ….။
ပြောသူတွေ ကြည့်လိုက်တော့ ဓဂယ် မလုပ်ဖူးသူ၊ မလုပ်တဲ့သူ၊ လုပ်မှာလဲ မဟုတ်တဲ့သူ များ၏။ ရွာဆိတ်များ စိုဂျဗာဇို့..။ ရွေးဂေါက်ပွဲ မဲထည့်ယုန်၊ လာဟောပြောလို့ ခရီးကလည်းနီး အပန်းလည်းမကြီး ရဲမဖမ်းမှာလည်း သေချာလျင် သွားနားထောင်ယုန်၊ မေမေစုက ကြက်သရေ ရှိလိုက်တာ နိုင်ငံခေါင်းဆောင် ဖြစ်ထိုက်သူ စဂါးလေပွားယုန်… အဲဒီ လူမျိုးများအိ။ သဒင်းစာဂနေ ဖမ်းမည် ဆီးမည် ဘာအုပဒေ ညာအုပဒေ ထုတ်သီလည်း ဆိုရော ကုတင်အောက် ဝင်ပုန်းသူနဲ့၊ မီးပိတ် ခေါင်းမြီးခြုံ အိပ်သူနဲ့၊ အချို့ကလည်း လူမိုက်နဲ့ပြိုင် ရန်မဖြစ်လို စိုဗဲ… (ဖျစ်နေဒါ ဖျစ်နေဒါ)။ အဲဒီ့ အချိန်ကြတော့ စောင့်ကြွားစောင့်ကြွား အချိုးမပြေ စိုဒဲ့ အောက်ခြေ ပါတီဝင်နဲ့ အပြစ်လိုက်လျှာ ပြောသူရွာဆိတ် ဘယ်သူပို (အချုိးချကြည့်လျင်) အနစ်နာခံ နောက်လိုက်ကောင်း လုပ်မည်လဲ စိမ်ခေါ်လိုက်ခြင်ရဲ့။
မဆလခေတ်မှာ ဦးနေဝင်းကြီးကို မထိရဲ မကိုင်ရဲတာနဲ့ ဘေးကင်းရန်ကွာ ရှိမြည့် အောက်ခြေ ပါတီ၊ ကောင်စီကို လက်ညှိုးထိုး အပြစ်ဖို့တယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ၈၈အရေးတော်ပုံကြီး ပေါက်ကွဲထွက်လာရော။ သဂျီးဘုံးတာ မျက်စေ့မှိတ်ထားပီး ဈေးသည် အလေးခိုးတာ အရက်ထဲ လှည့်ပြောနေတော့ ဘယ်သူ ယုန်ပါတော့မလဲ။ အခုလည်း ဟိုလူအသုံးမကျ ဒီလူအသုံးမကျ.. အမေစုကတော့ နတ်ဘုရား.. ဘာလုပ်လုပ် မဝေဖန်သင့်။ ထိုင်ရှိခိုးဂျ ကုသိုလ်ရမဲ… လို့ မီပြောယုန်တမယ်…။ ခုချိန်အထိ ဒေါ်စုကို ဝန်းရံပေးထားအိ၊ မီဒီယာက မသိ မှတ်သလား.. အခြား တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူ အသင်းအဖွဲ့များ ငုတ်တုပ်မေ့နေ ထင်သလား.. အားလုံးလိုလို ဆရာကြီး ဦးဝင်းတင် ချပေးခဲ့သော စုကို ဝန်းရံရေးမူဘောင် အတွင်းမှ ရှိနေသေးအိ။ ဒါကို ရွာဆိတ်များ မကျေနပ်နိုင်.. သူတို့လို မှန်ဗါ့ဖျား.. သခင်မဖျား လုပ်ရမည့်ပုံ…။
ယုန်ကြောင် ပုံဆောင် တုံဗျောင် ခြုံစောင်
အသင်းအဖွဲ့ ကုမ္မဏီ တခုမှာ စီအီးအို ရာထူး ယူထားလျင် ဒါထက်ပိုလို့ စီအီးအိုနဲ့ ချယ်ယာမင်န် ယာထူးပါ တွဲကိုင်ထားလျင်.. တာဝန်ခံမှု အပြည့်ရှိရသည်။ လက်အောက် ငယ်သား လွှဲချ၍ မရ.. ဝေဖန်သူများကလည်း နိုင်ရာ ဖိမထောင်းအပ်..။ ခုတော့ တဖက်သပ် အဲဒေါ့ အပေါ်ဂလည်း သံယောင်လေးလိုက်လို့ မ်ိန့်ခွန်းလေး ခြွေလိုက်၊ ရွှေပြည်ရေးတရားလေးဟောလိုက်… ဘာမှ ဟုတ်တိပတ်တိ ဖြစ်မလာ။ နိုင်ငံခြားမှာတော့ မအောင်မြင် တာဝန်ခံသူထွက်ပဲ.. မသိလို့ပါ၊ ဝိုင်းလိမ်ထားလို့ ဆင်ခြေပေးမရ။ ဒီတော့ ကုလားထိုင်မလှုပ်အောင် သူမလှုပ်ခင် ကိုယ်လှုပ်ရသည်။ လှုပ်မှတော့ ငြိမ်နေသူလို ဇိမ်မကျ၊ ရန်လည်း များ၏။ အားလုံးကြိုက် အလယ်မှာ နေခြင်လို့ မဖြစ်နိုင်မှန်း သိလာတော့သည်။ အဲဒမှာ နိုင်ငံပြုသုခမိန် ပေါ်ထွန်းလာသည်။ လူပြိန်းအကြိုက်လိုက် လုပ်ပြန်တော့ နိုင်ငံအကျိုးစီးပွား တိုးတက်မှု မရှိ။ ကြာတော့ လူထု ငြီးငွေ့လာမည်။ လူနည်းစု တက်ကနိုခရက်ဖက် လိုက်ပြန်တော့ ဘူဇွာတံဆိပ် အတပ်ခံရကာ လူထုနှင့် ကင်းကွာသည်။ အလယ်မှာရပ် တယားသူဂျီးလုတ်ပျံဒေါ့ ဟိုမရောက် ဒီမရောက် ဆိုင်ကယ်နှစ်စီး အပြိုင်စီး ကားယားဂျီး ဖြစ်အိ။ နိုင်ငံရေး အပေးအယူ စေ့စပ်လိုက်လျောမှုဆိုတာ အပြောလွယ်သလောက် အလုပ်ခက်ပုံ တင်ပြတာပါ။
မူဝါဒတရပ် ခိုင်ခိုင်မာမာ မဆုပ်ကိုင်ဘဲ၊ ရှင်းလင်းပြတ်သားမှု မရှိဘဲ၊ လက်တွေ့လုပ်ငန်းစဉ် မပါဘဲ ရေရှည်ခရီး သွားဖို့မလွယ်။ အဲလို သွားဖို့ကြတော့ တဖက်ဖက် ချဉ်းကပ်ရပြီ။ ညီမလည်းလိုခြင်.. အမလည်း လိုခြင်..အဒေါ်လည်းကြံ.. အမေကြီးပါ မခြံဆိုလျင်ဒေါ့… ယုန်ကြည်ချက်ပြောင်းမှ ဖစ်လိပ်မြည်။
တို့ ကတော့ …
ချစ်တဲ့ထဲ တစ်ချက်က …………
ဘယ် ကြောင် ညောင်လို့မှ ထမကြည့်၊
ဘယ် ခွေး ဟောင်လို့မှ တွန့်မသွားပဲ
မှန်တယ် သင့်တော်မယ် ထင်တာကို လုပ်သွားနိုင်တဲ့ စု ရဲ့ စိတ်ကိုပါပဲ။
ဟုတ်​ပါ့ဗျာ ကျုပ်​တို့ လူမျိုး​တွေရဲ့ အကျင့်​စရိုက်​ စည်းကမ်းမဲ့ မှု တ ရာအုပ​ဓေ အားနဲ မှု​တွေ ကို ​ပြောင်းလဲ​ပေးမဲ့ ​ခေါင်း​ဆောင်​ မ​မွေး​သေးဘူးထင်​ရဲ့
လာလ​ရော့ ​နောက်​ထပ်​နှစ်​ငါးဆယ်​ ဒန့်​တန့်​တန်​
ရှိတဲ့ အကောင်းဆုံး ခေါင်းဆောင်ကိုတောင် ကိုယ့်ရဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံး အားပေးမှု အထောက်အပံ့မပေးနိုင်ပဲ။
နောက် သူရဲကောင်းတွေ မျိုးဆက်တွေ မျှော်နေသေးတယ်။
သင်တန်း ဆင်းပွဲ အကြီးအကျယ်လုပ်ပြီး …….
မွေးထုတ်ပေးလို့ ရတဲ့ အရာ ဟုတ်ပါသလား ဟာဟာ သက်လျာဖြေစမ်းဘာ!!!
မိန်းမ ဖြစ်နေတဲ့ အမှုနဲ့ အထင်မကြီး၊ မရှိ ရှိတဲ့ အပြစ်ထောက်ချင်နေရင်တော့
မဟာ ယောက်ကျားဂျီး ဝါဒ ရှင်တွေလို့ သတ်မှတ်တယ်။
ခြစ်​ကိုယီး ​ရေခဲတုံးဇူလိုင်​ ကိုဝန်းယံဂျ
ဆိုတော့ ဘာဖြစ်ချင်တာတုန်း ဦးကြောင်က
မကျေနပ် ပြန်လာခဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် ရှင်းကြည့်ပါ့လား :loll:
ဂျစ် ကြောင်ကြောင် (မျက်နှာ ပြုံးပြုံးလေး နဲ့ နော်၊ လက်မှာ ဓားပါတယ်)
မြန်မာပြည်ထဲ အလုပ်လုပ်ခဲ့တုန်းက စက် ကို ခိုင်းဖို့ အတွက် ကပ်စတန်မာ တွေ ရှိရာ ကို သွား၊ စကားပြော၊ လက်ရှိ သူတို့ လုပ် နေတာတွေ ကို ကြည့်၊ နောက်ထပ် သူတို့ ဘာလုပ်ချင်တာလဲ မှတ် ပေါ့။
ပြီးတော့ ရုံး ကို ပြန်လာ သူတို့ လုပ်ချင်တာ တွေ ကို စက်နားလည်အောင်ရေးဖို့ မျက်နှာ ရှစ်ခေါက်ချိုး နဲ့ မဟာ ပီရိုဂရမ်မာများ (တို့များ ဖိုးသိကြားလေး ကို ကြည့်) ကို ရှင်းပြ။
ဒီမှာ ဘာတွေ့တုန်း သိလား။
တစ်ချို့ က ကိုယ်ဘာပြောပြော လက်ခံ ပြီး နားထောင် တယ်၊ ရ အောင် ရေးပေးတယ်။
တစ်ချို့က ကိုယ်ဘာပြောပြော လက်ခံ ပြီး နားထောင် တယ်၊ တလွဲ ရေးတယ်။
တစ်ချို့က ကိုယ်ပြောတာ ကန့်လန့် တိုက်တယ်။
အဲဒီ ကန့်လန့် တိုက်သူထဲ မှာ နှစ်မျိုး ရှိတယ်။
တစ်မျိုး က တကယ်ဘဲ ကောင်းဖို့ ကန့်လန့်တိုက် ပြီး ဇွတ်ငြင်း ပြောတာ။
နောက်တစ်မျိုး က ခက်တာ တွေ၊ အားစိုက်ရမှာတွေ ကို မလုပ်ချင်လို့ ဇွတ်ငြင်းပြောတာ။
ဒီလို ဘဲ ကပ်စတန်မာ (စားသုံးသူ လို့ ခေါ်ရမှာ ထော်လော်ကန့်လန့် ) တွေ မှာလဲ ဂျီ မျိုးစုံ၊ ကပ်တီး ကပ်ဖဲ့ မျိုးစုံ။
ဒီကြားထဲ ကွန်ပျူတာစနစ် ကြီး သုံးလိုက်ရင် သူ့ရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့် တွေ ပျောက်မစိုး လို့ ကန့်လန့်တိုက် နေ တဲ့ ကပ်စတန်မာ ရဲ့ ရုံးဝန်ထမ်း တွေ၊
နည်းပညာ ကို မသုံးရဲ လို့ မသိမသာရော၊ သိသိသာသာပါ နည်းမျိုးစုံ သုံး ဖျက် နေတဲ့ ကပ်စတန်မာ ရဲ့ ရုံးဝန်ထမ်း တွေ
လူတွေ ရဲ့ ကြား မှာ စနစ် အပြောင်းအလဲ လုပ်ဖို့ လွယ် တယ် ထင်သလား ကြောင်ကြောင် ရယ်။
စနစ် တွေ ထွင်ရင်း အောင်မြင်တာလဲ ရှိခဲ့ပါတယ်။
အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ကိုယ့် မှာလဲ တာဝန် အများကြီး ရှိပါတယ်။
သို့ပေမဲ့ ကိုယ်ကြိုးစားတိုင်း၊ ဖြစ်ချင်တာ ကို လုပ်ချင်တိုင်း မဖြစ်ဘဲ အလွဲ တွေ တွေ့ တတ်တာလဲ ကိုယ်တွေ့ပါ။
လူ တွေ အများကြီး နဲ့အလုပ်လုပ်ချိန် တစ်ချို့ဟာတွေ က သူများကိုလဲ အပြစ်တင်ဖို့ ခက်၊ ကိုယ့်ဟာကိုလဲ အပြစ် မယူသင့် တွေ တစ်ပုံကြီး။
ငယ်တုန်း က သူများ တွေ ဘော်လုံးကန်တာ ကို အားပေးရင်း ထုံးစံ အတိုင်း ဟိုလို ပြေး၊ ဒီလို ကန်၊ ဘယ်သူ့ပေး နဲ့ ဘေး က နေ အော်မိပါတယ်။
အဲဒါ ကို ကန် နေတဲ့ ထဲ က တစ်ယောက် က ဘော်လုံးကြီး ထိုး ပေး ရင်း ရော့ ကိုယ်တိုင် ဝင်ကန် တဲ့။
အဲဒါ ကို ဝင် ကန် တော့ ဟုတ်သားဘဲ။ တကဲ့ လဲ ကန် ရော လွယ်မှ မလွယ်ဘဲ နော။
ဒါပေမဲ့လဲ အကြံပြုတာ ကိုလဲ နားထောင် သင့် တာပေါ့။ ဟိ ဟိ။
ကျွန်မ တို့ က ဘေး က အော်နေတာ။
ကျွန်မ ယုံပါ တယ်။
ကျွန်မ တို့ အသံ တွေ ကို သူနားထောင် နေပါတယ်။
လိုက်လုပ်ဖို့ မလုပ်ဖို့ ကတော့ သူ သာ ဆင်ခြင်ပြီး ဆုံးဖြတ် သင့်ပါတယ်။
စနစ် မသုံးဖို့ တွန်း နေတဲ့ ကန့်လန့်တိုက် နေ တဲ့ ကပ်စတန်မာ ရဲ့ ရုံးဝန်ထမ်း တွေ လိုမျိုး
ကွင်းထဲ ကလိန် ကကျစ် နဲ့ လူချ နေတာ လိုမျိုး တွေ ကို လဲ ရှောင်နေရ တဲ့ အခြေအနေ ကို လဲ မြင်ပေးကြပါ။
ဘဝ ကြီး က ဒီလောက် မရိုးစင်းဘူး ကြောင်ကြောင် ရဲ့။
ပရိုဂရန်မာ တွေ က ကပ်စတန်မာ ရဲ့ ကလိန်ကကျစ် ရုံးဝန်ထမ်း တွေ ဘယ်လောက်ဆိုးနေတယ် မသိဘူး။
ကွင်းပြင် ကလူက ကွင်းထဲ ခြေထိုး ခံ နေရတာ သတိမပြုနိုင်ဘူး။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရင်ဆိုင်နေရတာက ဒီ ထက် အစပေါင်း များစွာ ဆိုး နေပါတယ်။
ရှင့်ရဲ့ အစ်မ က ပရိုဂရန်မာ ထဲ မှာ ဘယ်လို လူမျိုး ကို သဘောအကျဆုံး၊ အသုံးဆုံး ၊ လက်စွဲ အထားဆုံးလဲ ဆိုတာ
သိလား ကြောင်ကြောင် ။
ကျွန်မ ယုံကြည် တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က လဲ ဒီ အတိုင်း ဘဲ ရွေးထားမှာပါ။
နာတွ (ခွက်ဒစ် – ကြောင်)
ဂျားနေ၀ါဒ အလိုမရှိ.. ဂျားနေတယ်ဆိုတာ ဖိနှိပ်သူတွေကို အားပေးဒါနဲ့ တူတူပဲ..။
ပပနဲ့ မမ ဘယ်သူ ပိုလှလဲ
မမဆိုတာ ဒို့ရွာထဲဂ အာတီမမလား
အာ့ လာ မေး ဒါ
(ကျွန်မ တို့ အသံ တွေ ကို သူနားထောင် နေပါတယ်။
လိုက်လုပ်ဖို့ မလုပ်ဖို့ ကတော့ သူ သာ ဆင်ခြင်ပြီး ဆုံးဖြတ် သင့်ပါတယ်။)
ဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းတွေကို ယုံကြည်တယ်။
ကြောင်ကြောင်ရဲ့စာတွေဖတ်ရင်း ဦးဝင်းတင်ရဲ့ နေရာကို ယူနေတာများလားးးးးး